Fandaharana - Wikipedia
Ny fandaharana, amin’ny kajimirindra dia lisitra baiko hilazana ny solosaina ny zavatra tokony hataony. Amin’ny alalan’ny fandaharana ny anaovana ny zava-drehetra anaty solosaina iray. Ireo dia misy ohatra fandaharana :
Ny mpitety tranonkala, tahaka Mozilla Firefox, Safari an’i Apple, na Internet Explorer an’i Microsoft dia natao hijerena pejin-tranonkala eo amin’ny Aterineto.
Ny rindrankajy fiasana birao dia natao hanoratana taratasy na hanaovana kajy.
Fandaharana ihany koa ny lalao video.
Ny fandaharana dia tahirizina anaty kapila mateza. Rehefa mandefa fandaharana iray ny mpampiasa, dia mamaky ny lisitry ny baiko anatin’ny rakitra ny solosaina ary manatanteraka ny zavatra tian’ny fandaharana hotanterahiny ilay solosaina.
Misy ihany ka ireo fandaharana nosoratan’olona mba hanaovana zavatra ratsy eo amin’ny solosaina. Misy ireo fandaharana fitsikilovana izay mangalatra torohay ao amin’ilay solosaina misy azy ary mandefa azy any amin’ny tompon’ilay fandaharana; misy ny sasany natao hanimba ny torohay ao amin’ny kapila mateza na ny sasany mandefa ny mampiasa solosaina any amin’ny tranonkala sandoka hangalarana torohay tsy voatahiry toa ny tenimiafina
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fandaharana&oldid=694119"
Dernière modification le 22 Desambra 2014, à 23:04
Voaova farany tamin'ny 22 Desambra 2014 amin'ny 23:04 ity pejy ity.